VFX Legion iyo Xilliyadii ugu dambeeyay Xoghaynta Madam | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » Featured » VFX Legion iyo Xilliyadii ugu dambeeyay Xoghaynta Madam
VFX Legion iyo Xilliyadii ugu dambeeyay Xoghaynta Madam
Xilligii lixaad iyo kii ugu dambeeyay ee riwaayadaha siyaasadeed ee la dhacay, Xoghayaha Madam waxay ku bilaabatay baal dahab ah iyada oo ah Xoghayaha Arimaha Dibadda, Elizabeth McCord, oo ciyaaray dhaqdhaqaaqa shaaha Leoni waxay ku guuleysatay orodkeedii madaxtinimo. Saddex sano ah Laanta VFX tabaruca lagu bixiyay iyada oo loo marayo saamaynta kala duwan ee dhijitaalka ah ee ay ku bixisay show show ah oo ay ka soo baxday iyada oo ay la socdaan kuwa badan oo kale oo u tartamaya in telefishanka uu yahay shineemo cusub. Guusha xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay, iyo sidoo kale taxanaha taxanaha ahaa Xoghayaha Madam, waxaa lagu dhammaystiray iskudhaf adag oo isku xigxiga CG taxane ah.
Ku biirinta VFX Legion ee Ku Xoghayaha Madam
Markaad si qoto dheer u dhex gasho VFX Legion ee tabaruca, istuudiyaha fadhigiisu yahay LA / BC waxaa loogu yeeray inuu abuuro in kabadan 140 oo ah dhibaatooyinka muuqaal ee aadka u adag Madam Xoghayaha saddex xilli ciyaareed ee ugu dambeeya. Soosaarka dhammaan saddexda xilli waxay ka koobneyd deegaanno kombuyuutar-soo saaray oo u rari kara tallaabada tooska ah goobaha adduunka oo dhan oo ay la socdaan cunsur dijitaal ah iyo saameyno farsamo ahaan si gaar ah loogu talagalay inay sare u qaadaan saameynta muuqaalka abuuraha, qoraa, muujinta. Hoolka Barbara kacaan siyaasadeed oo horumarsan.
Waxay ahayd qiyaastii afaraad ee Xoghayaha Madam in VFX Legion markii ugu horeysay soo gashay sawirka ka dib soo saaraha show TV, Tony Palermo wuxuu la kulmay kormeeraha VFX, James David Hattin, iyo Soosaaraheeda Fulinta, Gubashada gubashada. Natiijadan ka soo baxday kulankan, wuxuu yidhi Burns, Tony wuxuu la yaabay inuu arko talaalada noocan oo kale ah ee lagu qancinayo ee Aqalka Cad iyo DC kana soo baxayo TV-ga, 'Scandal' oo ku saabsan shaqadeena 'CG.' muuqaalka muuqaalka ah - oo naga soo galay albaabka. ”
Isbeddellada xaddidan ee taas Xoghayaha Madam lahaa, inta badan meelaha laga toogtay, oo ay kujirtey guriga caddaanka, iyo sidoo kale goobo kale, oo ay ka dhasheen sawirka saamiga. Toogashada ayaa ah mid aan macquul aheyn markay timid qiimaha sare ee qaadashada wax soo saarka New York DC, oo ay weheliso qodobada lagu daray jadwalka waqtiga adag iyo jadwalka jilayaasha. Si kastaba ha noqotee, Thanks to VFX Legion 'sawirada dhabta ah ee kumbuyuutareedka kombiyuutarka laga sameeyay oo caado ahaan loogu talagalay inay si aan kala go' lahayn ula jaanqaadaan muuqaalka ficilka tooska ah ee show-ga wuxuu u adeegsaday sida ugu macquulsan oo wax ku ool ah, taas oo u saamaxday madadaalada dijitaalka ah ee goobaha filinka aan la gaari karin.
Markuu sharxaya ku habboonaanta VFX Legion ay bixisay, wuxuu Burns yiri "Saamiyada tayada sare leh, muuqaalka adag ee aan si dhakhso leh ugu leexanay iyo miisaaniyad loogu talagalay qaybta hore ayaa horseeday ballaarinta doorkii Legion." Waxaan u noqonay takhasus u tegista 'VFX' ee 'Xoghayaha Madam. Qolka qoraaga wuxuu bilaabay sameynta qoraallo leh muuqaallo ballaaran oo ka faa'ideysanaya hantidayada CG. ”
In kasta oo laga dhigay Washington DC, Xoghayaha Madam ayaa lagu toogtay magaalada New York. Bandhigga ayaa ka hadlay arrimo u baahan dibloomaasiyad caalami ah, kaas oo qaatay sheekooyin ka baxsan xuduudaha Mareykanka. Mahadsanid VFX Legion, kombuyuutarrada dhijitaalka ah ee Aqalka Cad ayaa loo dhisay sidii kulan muhiim u ah bandhigga. The Kooxda VFX waxay abuurtay bay'ada CG taasoo u sahalisay seenyooyinka inay ku ciyaaraan meelaha siyaasadeed ee adduunka ka jira. Tani waxay awood u siisay qaadashada riwaayad ahaan halka ay u awoodi weyday inay sii wado filim.
Balcony Kahor + Kombuyuutar Ka Dambeeyay Fasaxa Aqalka Cad
Muddo sanado ah oo laga shaqeynayay Xoghayaha Madam, VFX Legion sidoo kale waxay abuurtay taxaneyaal fara badan oo toosan, oo ku lug yeeshay ku darid tiro badan oo shaqsiyaad ah dhaqdhaqaaqa. Gabagabadii lixda xilli ee la soo gabagabeeyey, qorayaasha, animators, iyo farshaxanada CG waxay isticmaaleen taxane qabashada mooshinka kaas oo ay si qotodheer u dhiseen dad aad u tiro badan oo isugu yimid DC si ay u taageeraan madaxweynaha, dadaalkanna wuxuu u qaatay jilitaanka dhijitaalka ah ee heerka xiga.
Kahor + Ka dib -CG Set Extension + Digital Crowd Dup Iran ayaa dib u degaysa
Markay gaadhay xilligii shanaad, VFX Legion waxay maslaxad gelisay dad fara badan oo boqolaal ah kuwaas oo xoojiyay muuqaalkii asalka ahaa ee dadka soo barakacay ee Suuriya. Markii la xaqiiqsaday in tirada dadka aan ka turjumeynin baaxadda weyn ee reer Suuriya ee socdaalka ku tegaya xadka Turkiga, soo-saarehu wuxuu ku dhiirrigeliyay shirkadda saamaynta muuqaalka inay abuurto isku xigxig digital ah oo si weyn u kordhisay tirada qaxootiga ee isku xigxiga.
Shirkaddu waxay dhammaystirtay tallaabooyin muuqaal ballaaran oo muuqaal ah oo loogu talagalay natiijooyinka taxanaha ah, oo lagu xiray meher aroos lagu sharraxay oo ka dhacay Rose Garden oo ka faa'ideystay VFX Legion ee Hantida Aqalka Cad. Iyada oo Hattin gacan ka geysanaysa dadaalka, kooxdu way adeegsatay Software SpeedTree si loo soo saaro geedo macmal ah, oo ay markaa ku noolaan lahaayeen si ay dabaysha ugu dhigto dabaysha maalinta tallaalka la toogtay. Hirgelinta qaababka loo yaqaan 'bluescreens' waxay ku dartay qaybo kumbuyuutar ah oo kumbuyuutareed ka sameysan Aqalka Cad ee wajiga ka muuqda.
Kahor + Kadib - Taxanaha Finale -Bluescreen wuxuu bedelay asalka / CG ee Aqalka Cad
Marka laga hadlayo dadaalka cajiibka ah ee kooxda VFX, Hatten wuxuu bogaadiyey dadaalkooda isagoo yiri “Soo-saare Tony Palermo, iyo soosaaraha wax soo saare Drew Ysais, waxay noo wada shaqeeyeen koox ahaan, xiriirinta Legion marxalad kasta oo ka mid ah geeddi-socodka VFX.” oo waxay siisay waqti dheeri ah si ay diiradda u saaraan sidii looga soo saari lahaa waxa ugu badan ee wax soo saarka laga helo duruuf kasta. ”
Hatten ammaankiisa halkaas kuma uusan dhamaanin markii uu hadalkaas sii waday “Heerka xiisaha leh ee bandhigyada telefishanka ee ay diyaarisay Barbara Hall ayaa ka dhigaya caqabad sare.” “Waxaan ku faraxsanahay in howsheena ay la kulantay heerarkeedii sare isla markaana aan ku faraxsannahay inaan fursad u helnay abuurista saameyn muuqaal ah oo sare u qaadday saameynta muuqaalka ee taxanahan. . ”
VFX Legion Asal ahaan
VFX Legion markii ugu horaysay la bilaabay 2013. Aasaasaha, CD, kormeeraha guud ee muuqaalka muuqaalka muuqaalka ah, James David Hattin, kooxda maaraynta istuudiyaha, shaqaalaha taakuleynta, waxay u shaqeeyaan sidii unug keli ah oo hufan oo ay wadajiraan 80+ fanaaniin VFX ah oo la kulmaya caqabadaha toogashada sare. tirinta iyo waqtiga kama dambaysta ah ee mashaariicda badan, kuwaas oo diiradda lagu saarayo bixinta bandhigyo telefishan oo qayb ka ah filimaan oo leh muuqaal tayo sare leh oo adeegsanaya miisaaniyaddooda buuxda.
Qaar ka mid ah Dhibcaha VFX Legion ee TV And Film ku dar wax soo saar sida:
Sidee Looga Dhow Yahay Dilka
qoon gaystay Henry
Kacdoonka: Sanadka doorashada
Xarunta VFX Legion xarunteeda waxay ku saleysan tahay Burbank, iyo British Columbia iyo wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan shirkadda iyo adeegyadeeda hal-abuurka ah, ka dib iska hubi www.vfxlegion.com [Email ilaaliyo] ama wac 818.736.5855.
Udoodar Ololaha Caafimaadka Aurora / Colonie Hoolka Barbara ' Warbaahinta-Warbaahinta Warbaahinta-SocialMedia Graham Chapman Prmoted toEditor James David Hattin taxanaha CG ballaaran Xoghayaha Madam Gubashada gubashada Spears & Fiilooyinka Software SpeedTree shaaha Leoni COLONIE / Chicago TV Technology Ultra HD Forum Laanta VFX Kooxda VFX	2019-12-24
Previous: Siday Cooke miniS4 / i Lenses caawisay Abaalmarin guuleysata DP Capture Nature's Beauty
Next: Gotham Sound wuxuu isku dayaa inuu ku lumay booskii Lectrosonics